Kenya ny fialantsasatra Safari, Safaris any Kenya, Kenya Budget Safaris, Kenya Safari, Budget Holiday Safaris
Safarisoa ny fialan-tsasatra amin'ny tetibola
Kenya ny fitsidihana an'i Kenya, Kenya Safari, Kenya Safaris, fitsidihana safidianina any Tanzania
Fiakaran'ny Tendrombohitra Kilimanjaro Safaris
Fihaonana tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana teti-bola & trano fitsangatsanganana tsara indrindra Kenya & Tanzania.Manakaiky akaiky ny fanahin'ny tany afrikana afrikanina & traikefa tsara indrindra.
MANKASITRIKA DIA MISY FIVORIANA HODIDY SAFARIS
Mandehandeha amin'ireo manampahaizana mahalala an'i Afrika.
Budget Holiday Safaris dia mpandraharaha mpizahatany any Kenya sy Tanzania, manome lisitr'ireo serivisy safidin'ny safidim-pizarana ho an'ny isam-batan'olona sy vondrona any amin'ny firenena roa tonta. Safidy ara-tsosialy Safarisarian'ny matihanina matihanina, izay manana traikefa mihoatra ny folo taona amin'ny indostrian'ny fizahan-tany. Ny orinasa dia miara-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka fototra amin'ny indostrian'ny Travel and Hospitality any Kenya sy Tanzania mba hanomezana tolotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa. Manana serivisy isan-karazany izahay, izay azo atao mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny tena manokana ary hiara-hiasa ny mpiasa manokana izahay hanome ny tolotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa samihafa. Ao amin'ny Ivotoerana Nairobi City no misokatra ny biraontsika rehetra amin'ny 7:00 maraina, 7 andro isan-kerinandro, manome tolotra fanampiana sy fangatahana vonjy maika, 24/7
3 ANDRO KENYA TOUR: MASAI MARA PACKAGE
Ilay toeran-tsarin'ny safidim-pirenenan'i Kenya, ny tahiry lalao Masai Mara, dia tahiry lalao malaza eran'izao tontolo izao noho ny fifindra-monina wildebeest isan-taona, fantatra amin'ny anarana hoe Migration Great, izay voatanisa ho toy ny fahagagana faha-valo.
5 ANDRO MT KENYA CLIMB- SIRIMON-SIRIMON ROUTE
Hihazo ny ala mankany amin'ny lalambe midadasika mankany amin'ny faritra an-tampon-kavoana. Manomboka eo amin'ny ilany avaratra-andrefan'ny tendrombohitra akaikin'i Nanyuki. Ampy ny fahazoana miditra ary ny trano fonenana bunk no tsara indrindra amin'ity lafiny tendrombohitra ity.
Hijery ny Safari
6 ANDRO KENYA SAFARI: MASAI MARA - LAKE NAKURU - AMBOSELI
Ny farihy Nakuru dia heverina hatrany ho fahatsaran-tarehy farihy flamingo. Ny tsy fitovian-kevitra sy ny fiovana miharihary eo anelanelan'ny farihy soda misy ny vorona mpihaza sy ny ala mihetsiketsika.
6 ANDRO FIVORIANA KILIMANJARO FIVORIANA: ROOTE MACHAME
Ity angamba no lalana tsara tarehy tsara indrindra avy hatrany Kilimanjaro. Ny fitaovanao sy ny entanao rehetra dia voapetaka ary ny mpahandro iray dia manomana ny sakafonao rehetra, Izay misy trano hipetrahana ao amin'ny lalan'i Marangu.
8 ANDRO FIVORIANA HOLIDAY SAFARI - MASAI MARA
3 alina ao amin'ny Masai Mara Game Reserve- Kenya, izay hahitanao traikefa mihoatra ny iray. 1 alina tany amin'ny Lake Nakuru izay ahitanao ny flamingos, fotsy sy mainty hoditra ary zavatra hafa maro.
10 ANDRO KENYA SY TANZANIA BUDGET SAFARI: MASAI MARA
10 andro i Kenya sy ny tanzania safari safari dia safarian-tsambo izay manome anao traikefa safari voajanahary. Manarona ny Masai Mara, Lake Lake, Serengeti, Ngorongoro Crater ary Farihy Manyara izahay.
Safarisoa ny fialan-tsasatra amin'ny tetibola vokatra dia ahitana tahiry feno safarisoa feno Kenya ary Tanzania ary Oganda. Ny trano fandraisam-bahiny Safarisoa mampitony Safarisima, Toeram-pivoriana mihazakazaka maharitra an'i Safaris, Fiakarana an-tendrombohitra Kenya, Nandeha Safaris Ny laharam-pahamehana natokana ho an'ireo firenena tsy dia nohararaotina faritra, kolontsaina ary fitsangatsanganana foko ary fialantsasatra amoron-dranomasina.
Na ny fitsangantsanganana mahazatra sy i Tailor made safaris dia vidiny mifaninana ary natao manokana hifanaraka amin'ny tetibolao. Safarisoa ny fialan-tsasatra amin'ny tetibola manolotra serivisy seranam-piaramanidina tsy miankina eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Kilimanjaro sy Arusha. Manana serivisy an-tanety ihany koa izahay, ao anatin'izany ny famandrihana hotely sy ny famindrana seranam-piaramanidina mankany amin'ny hotely ao an-tanàna sy ireo hotely ivelan'ny tanàna.
Budget Holiday Safaris dia mpandraharaha mpizahatany any Kenya sy Tanzania, manome lisitr'ireo serivisy safidin'ny safidim-pizarana ho an'ny isam-batan'olona sy vondrona any amin'ny firenena roa tonta.
Hotely sy Safari Lodges
Ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny fitsangatsanganana
mpitari-tolotra vonona hanampy.
Tranon'ny St.Ellis, làlana Wabera
© 2019. Zo rehetra voatokana. Safarisoa ny fialan-tsasatra amin'ny tetibola
Web Design nataon'i Webscreationsdesign.com